Shina: Lisitra maintin’ireo mponin’ny aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Novambra 2010 15:39 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Nederlands, English
Mponin'ny aterineto 80 no nataon'ny governemanta ao Shanghai ao anaty lisitra mainty ary navoaka ho fanta-bahoaka ny anarana sy ny laharana IP ampiasain-dry zareo tao amin'ny tranonkala the Expose Channel of Shanghai Internet Social Credibility. Ny ankamaroan'ireo mponin'ny aterineto tafiditra ao anaty lisitra dia voampanga ho nanohintohina toy ny hoe “fanelezana tsaho” sy fanelingelenana ny filaminam-bahoaka sy ny ara-tsosialy”.
Ireo fampahafantarana hita ao amin'ilay tranonkala dia ahitàna : 1. ny anarana fampiasa; 2. ny anaran'ireo tranonkala na ireo tranonkalam-baovao sosialy nisian'ny fandikan-dalàna nataony; 3. ny karazana hadalàna vitany; 4. ny ora marina nanaovany ny asa fanoherany; 5. ny mombamomba ny laharana IP; 6. ny toerana misy sy ampiasàna ilay IP.
Araka ny tatitry ny Beijing Youth Daily tamin'ny 2 Novambra dia miara-mitantana ny The Expose Channel ny Polisin'i Shanghai momba ny Fiarovana ny Aterineto sy ny Fikambanana mitantana ny Fiarovana ny Vaovao ao Shanghai. Ny rakitahiry ao anatin'ilay lisitra dia nangonina teo anelanelan'ny 23 aprily 2007 sy 6 Oktobra 2010.
Ny sasantsasany amin'ireo hoe fanohintohinana dia tsy misy lanjany manao ahoana akory, toy ny hoe fandefàsana sary tsy mendrika sy tsaho. Amin'ny tranga sasany dia fampitandremana am-bava fotsiny avy amin'ny polisy misahana ny fiarovana amin'ny aterineto no azon'ireo mponin'ny aterineto ary tsy nisy nentina teny anoloan'ny fitsarana. Ireto no ohatra tanisaina ao amin'ny infzm.com:
1. Anaran'ny mpampiasa, Han Naichuan, namoaka lahatsoratra iray momba ny “tsiambaratelo tsy misy mpahalala mikasika ny fanadinana fidirana amin'ny anjerimanontolo” tao amin'ny tranonkala RenRen, nahatsiaro nanenina izy taorian'ny fampitandreman'ny polisy.
2. “yellow-cas” nanambara tanaty aterineto fa te-hanatanteraka fihaonamben'ny karazana fiaramanidina izy mba hanaovana fampisehoana an'habakabaka mandritry ny Shanghai EXPO. Nahatsiaro nanenina koa izy taorian'ny fampitandreman'ny polisy.
3. zzj00, tsy faly amin'ny fanoran'ny polisy mpandamina fifamoivoizana, namoaka tanaty aterineto fa te-hanaraka ny ohatra nomen'i Yang Jia (ilay malaza amin'ny famonoana polisy), nahatsiaro nanenina izy taorian'ny fampitandreman'ny polisy.
4. 357156568, nahazo fampiatoana (mise à pied) avy amina mpampiasa 2 ary tapaka (Avy amin'ny mpandika: tsy manan-koraisina intsony), nilaza izy fa niomana hanapoaka ny EXP. Voatazona vonjimaika araka ny lalàna izy.
Ny mponina sasany eo amin'ny aterineto dia niteny fa ny famoahana imasom-bahoaka ny mombamomba ny olona manokana dia tsy hoe fotsiny fandikàna sy fanaovana zinona ny fiainana manokana fa koa loza mitatao amin'ny fanosoram-potaka eo anivon'ny fiainana ara-tsosialy no sady ompa imasom-bahoaka.